Yan, Author at Shwe Khit Online TV
Articles by Yan
အမြင်အာရုံကို အမှားမှား အယွင်းယွင်း ဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ ပုံများ
December 31, 2021 Yan 0
ပရိသတ်ကြီးကို အခုတစ်ခါမှာတော့ ရုတ်တရက် ကြည့်ရင် အမြင်မှားသွားအောင် ဖန်တီးထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ အကြောင်းကို ပြောပြပေးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဘယ်လို ပုံလေးတွေ ဖြစ်မလဲဆိုတာကတော့ အောက်ကပုံလေးတွေ တစ်ပုံချင်းစီကို ကြည့်လိုက်ပါဦးနော် …. shwekhitonlinetv.com ၁ ။ ခြေထောက် ပေါက်နေတဲ့ အိတ် ဒီပုံလေးကို အမှတ်တမဲ့ ကြည့်လိုက်ရင် အိတ်က ခြေထောက် ပေါက်နေတဲ့ ပုံစံမျိုး ဖြစ်နေတာပါ ။ တစ်ကယ်တမ်းကတော့ ဒီခြေထောက်ရဲ့ […]
ဒေါ်လာ သန်းချီရမယ့် အခွင့်အရေးကို လွဲချော်သွားခဲ့တဲ့ နာမည်ကြီး အနုပညာရှင်များ
December 23, 2021 Yan 0
ပရိသတ်ကြီးကို အခုတစ်ခေါက်မှာ ပြောပြပေးမယ့် အကြောင်းအရာလေးကတော့ ဒေါ်လာသန်းချီရမယ့် အခွင့်အရေး ကို ငြင်းပယ်လိုက်သလို ဖြစ်သွားတဲ့ နာမည်ကြီး ကမ္ဘာကျော် အနုပညာရှင်တွေ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီအထဲမှာ ဘယ်သူတွေ ပါမလဲဆိုတာကတော့ အောက်ကပုံလေးတွေ တစ်ပုံချင်းစီကို ကြည့်လိုက်ပါဦးနော် …. ၁ ။ Emily Browning ပထမဦးဆုံး ပြောပြပေးမှာကတော့ Twilight စီးရီး ထဲမှာ ခေါင်းဆောင် မင်းသမီး နေရာ ကနေ […]
November 12, 2021 Yan 0
အခုတစ်ခါ ပရိသတ်ကြီးကို ပြောပြပေးမယ့် အကြောင်းအရာလေးကတော့ Squid Game ဇာတ်ကားထဲက ရိုက်ကွင်း အလွဲလေးတွေ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဘယ်လို အလွဲလေးတွေ ပါမလဲဆိုတာကတော့ အောက်ကပုံလေးတွေ တစ်ပုံချင်းစီကို ကြည့်လိုက်ပါဦးနော် …. shwekhitonlinetv.com ၁ ။ နံပါတ်တူ နေတဲ့ သရုပ်ဆောင် ( ၂ ) ယောက် Squid Game ဇာတ်ကားထဲမှာ ဂိမ်းကစားဖို့ ပါဝင်တဲ့ လူဦးရေက […]
November 11, 2021 Yan 0
ပရိသတ်ကြီးကို အခုတခေါက် ပြောပြပေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးကတော့ အသက်အန္တရာယ်ဘေးကနေ ကံကောင်းစွာနဲ့ လွတ်မြောက်သွားခဲ့တဲ့ လူတွေ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ သူတို့ ဘယ်လောက်တောင် ကံကောင်းသွားကြလဲဆိုတာကတော့ အောက်ကပုံလေးတွေ တစ်ပုံချင်းစီကို ကြည့်လိုက်ပါဦးနော် …. shwekhitonlinetv.com ၁ ။ ကား( ၂ ) စီးကြားထဲ ရောက်သွားပေမယ့် မထိခိုက်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသား ကားလမ်းမပေါ် စက်ဘီးစီးသူတွေ အတွက်ကတော့ ကျွမ်းကျင်မှု မရှိရင် အတော်လေးကို အန္တရာယ်များတယ်လို့ပဲ […]
အာကာသထဲက တန်ဖိုးကြီး စိန်တွေ ပေါများတဲ့ ဂြိုလ်တွေ အကြောင်း
November 8, 2021 Yan 0
ပရိသတ်ကြီးကို ဒီတစ်ခါမှာ ပြောပြပေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးကတော့ အာကာသထဲက တန်ဖိုးကြီး စိန်တွေ ပေါများတဲ့ ဂြိုဟ် တစ်ခု အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီ ဂြိုဟ်တွေမှာ စိန်တွေ ဘယ်လောက်တောင် ရှိမလဲဆိုတာကတော့ အောက်ကပုံလေးတွေ တစ်ပုံချင်းစီကို ကြည့်လိုက်ပါဦးနော် …. shwekhitonlinetv.com Yale တက္ကသိုလ်က နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာ စိန်တွေ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း နဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ကျောက်ဆောင် ဂြိုဟ်ကြီး တစ်လုံးကို ရှာတွေ့ခဲ့ကြပါတယ် […]
November 6, 2021 Yan 0
ပရိသတ်ကြီးကို အခုတစ်ခါပြောပြပေးမယ့် အကြောင်းအရာလေးကတော့ Marvel ဇာတ်ကားတွေရဲ့ နောက်ကွယ်က ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ လူတွေ အ‌ကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့က ဘယ်သူတွေ ဖြစ်မလဲဆိုတာကတော့ အောက်ကပုံလေးတွေ တစ်ပုံချင်းစီကို ကြည့်လိုက်ပါဦးနော်…. shwekhitonlinetv.com ၁ ။ Karen Gillan Karen Gillan ကတော့ စကော့တလန် နိုင်ငံသူ တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး Marvel ထဲမှာ Nebula ဆိုတဲ့ ဇာတ်ဆောင်နေရာကနေ ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားသူ […]
မြင်တွေ့ဖို့တောင် မလွယ်ကူနိုင်တဲ့ ကမ္ဘာပေါ်က အကြီးဆုံး သတ္တဝါ ( ၁၀ ) မျိုး